Kuphephile kangakanani ukwakha ama-backlink amasha ngokudalwa kokuqukethwe nokunyuswa?
Ngikholelwa ukuthi indlela engcono kakhulu yokwakhiwa kwe-backlink entsha ehambisana newebhu lakho noma ibhulogi idala okuqukethwe okuyingqayizivele okuletha inani langempela kubafundi. Ngakho-ke, ukuba nekhwalithi ephezulu futhi ukhuthaze ngendlela efanele kungokwemvelo ukukhulisa ukuthandwa kwakho emphakathini waku-intanethi, ukukhiqiza amasheya amaningi, ukuhola, okulandelayo, ukubhalisa, futhi okwakhiwa, ukwakha izizinda ezintsha. Futhi indalo yokuqukethwe ihlale ikhokha - okuqukethwe okubaluleke kunakho konke okukhona, kungcono amathuba ayo okubonga umsebenzisi, futhi uxhumane nakho konke.
Kodwa ukuthi kuphephile kanjani ukwakha ama-backlink amasha kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi enokuqukethwe okuqinile kwezinye izihloko ezithandwayo nezifunwa kahle? Ukususwa okubalulekile kulokhu kungukuthi izinjini ezinkulu zokusesha ezifana ne-Google ngokwalo zifuna zonke i-backlink ezihlobene nokuqukethwe okufanele kwenziwe ngokuhlelekile. Kusho ukuthi izi-backlink ezinjalo kufanele zilawulwe ngendlela ehleliwe ukusuka eceleni komthombo wesithathu oxhumanisayo. Kulula, zonke izixhumanisi zakha ngokuzenzekelayo (okungukuthi, ngaphandle kokulawula kwangempela kokuhlela) zimbi (ngaphandle kwalokho, ezisezingeni eliphansi) kusuka kwombono we-Google search engine. Yiqiniso, le "ncazelo" ikhululekile, kodwa inengqondo. Ngakho-ke, masibhekane nakho - ukwamukela isakhiwo esixhunyanisayo sokwakha isixhumanisi, noma uhlelo olugxile ekutheni uthole ama-backlink amaningi ngangokunokwenzeka akumele wenze izinto, ezingahlangene nokuphepha kwakho ngokumelene nezinhlawulo ze-Google.
Ngakho-ke, uma kuziwa ngendlela evumelekile futhi ephephile ngokuzakhela ukwakha kabusha ama-backlink ngokuqukethwe ngaphansi kokulawulwa kokuhlela, nansi amaqhinga amakhulu okudalwa kokuqukethwe nokukhuthazwa okuzosetshenziselwa iwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Ngizokweqa ukukhetha okuhleliwe okuhleliwe (njengokungxoxwa, ama-infographics, ama-baits wokuxhumanisa, njll.) Ukukukhombisa ezinye izindlela zokwakha ama-backlink amasha ngokuqukethwe. Badinga ukucaciswa okuncane ngalokho okwenza kubonakale bephephile emehlweni e-Google. Ngakho-ke, masihambe ngokushesha.
Ukubhula kwabamemezeli - okokuqala, isayithi lokuxhuma noma ibhulogi inokhetha ukwamukela noma ukungacabangi ngempande yakho . Futhi-ke, kufanele kube khona ukulawulwa kokuhlela okubhaliwe kuzo zonke izixhumanisi ezintsha ngemuva kokushicilelwa kamuva nje noma okuthunyelwe kwebhulogi.
Ukwaziswa kweziNgisi - ukuhambisa ezincwadini ezibukeza zonke izethulo zizophephile uma zigcina ukulawulwa kokuhlela (ngaphandle kwalokho, uma nje zilahla wonke amasayithi namabhulogi wezinga eliphezulu).
Ukukhishwa kwezindaba nokuxhaswa kwemithombo (Media) - ukubhekana nabo kuhle uma bekhipha ukukhishwa okuphindaphindiwe kwezindaba kuphela ezifanelekayo futhi akukho okunye okunye. Mane ukhumbule, lolu hlobo lwewebhusayithi yezindaba lenzelwe ukusabalalisa, hhayi ngesixhumanisi sokuqala ngokwaso.
Amazwana ebhulogi - ngokucabangela ukuthi ukukhetha kokuhlela ngokuvamile kungokuqondile kubhulogi, inombolo ekhethiwe kuphela yamabhulogi aphezulu aphephile ayokwakha ngokwanele ukwakha ama-backlink amasha kanye nokuqonda okunembile kanye nekhwalithi ephezulu ukuphawula.
Ama-Forums ahlobene, i-Niche Community, nama-Sites Sites - kungaba yizindawo ezingaphephile zokuxhumanisa isixhumanisi nokudalwa kokuqukethwe nokukhuthazwa. Kungenxa yokuthi noma yikuphi ugaxekile kuzosuswa ngabomengameli ngesaziso esifushane noma kuncishiswe ngumphakathi wendawo cishe nganoma yisiphi isikhathi Source .